Igwe eji egbutu akwa FIBC
Igwe eji egbutu eriri FIBC
Igwe nhicha FIBC
Igwe eji egbutu Ultrasonic
Igwe na-eji akwa akwa akwa karama
Kedu ihe bụ baling press?
site admin na 2021-11-01
Igwe igwe na-akụ baling bụ igwe na-ahụ maka ihe mkpofu raara onwe ya nye nke na-akwakọba ihe ndị enwere ike ịmegharị dị ka akwụkwọ, kaadiboodu, na rọba, n'ime nnukwu ùkwù nwere ike jikwaa (bales). A na-akpọkwa igwe baler ma ọ bụ igwe baling, igwe na-akụ baling bụ nnukwu ụlọ nchara nwere efere igwe na-agbago elu na ala ruo ...
Igwe eji emechi karama PE karama…
site admin na 2021-07-21
PE bottle shape liner sealing igwe bụ ụlọ ọrụ anyị nọrọ ọtụtụ afọ nyocha na nnwale, igwe na-eji akara akara karama mere. Igwe a nwere ọtụtụ ọrụ, dị ka akara ala, ịcha ala, akara ihu, akara ọnụ karama na ịkpụ ọnụ karama ...
Uru nke FIBC akwa cutter
site admin na 2020-12-23
FIBC ákwà ọnwụ igwe nwere ọtụtụ uru , dị ka elu na-agba ọsọ, akpaka mbịne ákwà, akpaka stacking ákwà, ọ dịghị mkpa maka ntuziaka ákwà, na-azọpụta ọrụ, ukwuu mbenata ọrụ ike nke ndị ọrụ na ọtụtụ ndị ọzọ uru. Akpụchapụrụ akwa oghere pụrụ iche...
Ụkpụrụ na-arụ ọrụ nke igwe eji akwa eriri FIBC
site admin na 2020-12-16
Ụkpụrụ na-arụ ọrụ nke igwe eji akpa eriri eriri FIBC bụ ihe mejupụtara usoro ise: usoro mmeghe, usoro nri akwa, usoro mkpọchi, usoro ịkụ ihe na usoro mkpuchi. 1. Usoro mmeghe iji mee ka ...